गण्डकी मेडिकल कलेज : ताला खुल्यो, रिले अनशन जारी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
गण्डकी मेडिकल कलेज : ताला खुल्यो, रिले अनशन जारी
फाल्गुन १४, २०७५ विना थापा
कास्की — गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले लगाएको ताल सोमबार प्रहरीले खोलेको छ । नियमविपरीत असुल गरेको शुल्क फिर्तासहितका चार सूत्रीय माग राखेर २६ दिनअघिदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।
२६ दिनदेखि आन्दोलनरत पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले लगाएको ताला खोल्न बल प्रयोग गर्दै प्रहरी । तस्बिर : विना/कान्तिपुर
पोखरा नयाँबजारस्थित मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका अन्य कक्षमा तालाबन्दी गरेर रिले अनशनमा बसेका थिए । प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै ताला खोले पनि विद्यार्थीले अनशन जारी राखेका छन् ।
वडा प्रहरी बैदामका प्रहरी नायव उपरीक्षक कोमल शाह नेतृत्वको प्रहरी टोलीले ताला खोल्ने क्रममा आफूहरूमाथि बल प्रयोग गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा विद्यार्थीहरू रविना मिश्र, प्रेमदेव जोसी, अपिल भण्डारी, निशान केसी, विप्लव खत्री, आशीर्वाद शर्मा भट्टराई, रविन साह, जीवन विक र सन्ध्या महर्जन घाइते भएका छन् । मिश्रलाई अस्पतालकै आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको छ ।
बिनासहमति ताला खोल्न नपाइने भन्दै विद्यार्थीले अवरोध गर्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो । ताला खोल्दा कलेज व्यवस्थापनका पदाधिकारी भने उपस्थित थिएनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुगमन टोली आउने सूचना पाएपछि व्यवस्थापनले प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर सहमतिबिनै ताला खुलाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।
जिल्ला प्रशासनले सोमबार बिहान कलेजको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जानकारी विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई दिएको परिवर्तन भाटले बताए । गण्डकीलाई सम्बन्धन दिने त्रिविले हालको गतिरोध अध्ययनका लागि कुसुम शाक्यको संयोजकत्वमा रोहित पोखरल, राजकुमार पोखरेल, अनुपकुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्र खनाल सम्मिलत समिति गठन गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई दिएको हो । टोली अध्ययनका लागि आउने भएकाले तालाबन्दी नगर्नुस् भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भाटले बताए । आन्दोलनका नाममा अस्पताललाई बन्द गरेर राख्नु राम्रो नभएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए ।
‘सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्छ । विद्यार्थीको दाबीअनुसार कलेजले बढी शुल्क लिएको पाइएको खण्डमा नियम कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका नाममा कलेजको अस्पताल प्रभावित भएको छ । बिरामीहरूले दु:ख पाउनु भएन ।’ आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधिसँग मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडी, सुनील शाह र कालुसिंह खत्रीलगायतले गत शुक्रबार छलफल गरी काठमाडौं फर्किएका थिए ।
व्यवस्थापन पक्ष विद्यार्थीको माग मान्न तयार नभएपछि छलफल निष्कर्षमा भने पुगेको थिएन । विद्यार्थीको आन्दोलन जारी रहँदा त्रिविअन्तर्गतको अनुगमन निर्देशनलयले डा. ओमप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा बाबुराम दाहाल र पुष्कर सिंहलगायतको टोली कलेजमा अनुगमनका लागि पठाएको थियो । उक्त टोली फर्किसकेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ १०:०९
सर्पदंसको उपचारमा समस्या
नवलपुर — सघन उपचार कक्षको नहुँदा पूर्वी नवलपरासीमा सर्पदंसका घाइतेले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । विषालु सर्पको बासस्थानका रूपमा परिचित भए पनि उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाको भर पर्दा अधिकांशले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्दछ ।
गर्मी मौसम र वर्षायाम सुरु हुन लागेपछि यस क्षेत्रमा सर्पदंसका बिरामी बढ्ने गर्दछन् । वर्षा लागेसँगै खोलानालामा बाढी आउने र प्वालहरूमा पानी भरिएपछि सर्प बाहिर निस्कने गर्दछन् । खेती लगाउने मौसम हुनाले अधिकांश किसान खेतबारीमा नै हुने र घर वरपरसमेत झाडी मौलाएपछि सर्पको डसाइबाट बर्सेनि सयौं प्रभावित हुने गरेका छन् ।
उपचारका लागि सघन (आइसियु) सेवा भएको अस्पताल आवश्यक परेपनि सो सेवा जिल्लामा उपलब्ध नहुँदा सर्पदंसका बिरामीले दु:ख पाएका छन् । आईसीयूमा उपचार गर्ने बिरामी जिल्लाबाहिर पठाउँदा बाटोमै ज्यान जाने जोखिम रहेको छ । चैतदेखि असोजसम्म नवलपरासीमा विषालु सर्पको टोकाइका बिरामी अत्यधिक हुने गर्दछन् । करेत र गोमन प्रजातिमा सर्पको टोकाइले यहाँका बासिन्दाको ज्यान लिने गरेको सर्पदंस विशेषज्ञ डा. छविलाल थापाले बताए ।
‘जिल्लाको सर्दी, अरुणखोला, चोरमारालगायतका क्षेत्रमा बढी विषालु सर्प भेटिने हुँदा अधिकांश बिरामी सोही क्षेत्रबाट आउँछन् । ’ डा थापालेभने, ‘योबाहेक परासी क्षेत्रको त्रिवेणीमा अझ विषालु रसयल भाइपर प्रजातिको सर्पको टोकाइबाट सर्वसाधारण प्रभावित हुने गरेका छन् ।’
मानिसलाई डस्ने सर्पको पहिचान नहुँदासम्म उपचार सम्भव नहुने र पत्ता लगाउने किटको अभावमा उपचार सम्भव नभएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । सर्पले टोकेका बिरामीमध्ये १० प्रतिशत मात्र विषालु हुने गर्दछन् । बाँकी ९० प्रतिशत विषालु नभए पनि जिल्लामा उपचार छैन भनेपछि बिरामी र आफन्त आत्तिनाले कतिपय बिरामीलाई ह्दयघातसमेत हुने गरेको छ । बच्चा र बूढाबूढीलाई टोक्दा पहिचानमा समस्या हुँदाउनीहरूको उपचार जटिल हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
कालीगण्डकी सामुदायिक अस्पताल कावासोतीमा सर्पदंसको उपचार हुने गरेको छ तर आईसीयू नहुँदा अधिकांश बिरामीलाई भरतपुर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । उपचार सेवा भए पनि विषालु सर्पले डसेका बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष आवश्यक पर्दा चितवन र बुटवलका अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचार नभएपछि सीधै बाहिरी जिल्लामा बिरामी जाने हुँदा प्रभावित र मृत्यु हुनेको एकिन तथ्यांकसमेत जिल्लामा उपलब्ध छैन ।
स्थानीयले जिल्लामै उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । उपचारका लागि जाँदाजाँदै अधिकांश बिरामीको मृत्यु हुँदासमेत सम्बन्धित निकाएले चासो नदिएको कावासोतीका निमेश पौडेलले गुनासो गरे । ‘सर्पले टोकेपछि आधा–एक घण्टामा विष फैलिसक्ने भए पनि उपचारका लागि चितवन पुग्नै एक घण्टा लाग्छ ।’
भुषालले भनिन्, ‘यो वर्षामा सबैलाई यसैको त्रास हुने गर्दछ ।’ वर्षौंदेखि जिल्लावासीले यस विषयमा आवाज उठाए पनि निजी अस्पतालमा समेत सघन उपचार सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कालीगण्डकी अस्पतालले सघन उपचारका कक्षका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । तर, तत्काल सेवा सुचारु नहुँदा यो वर्षातमा समेत उपचारका लागि बाहिरी जिल्लामा नै जानुपर्नेबाध्यता छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ १०:०७
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई एकहप्ते भ्रमण बिदा, खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने
पारित भयो दोहोरो सुविधाको विधेयक
सांसदसँग विकास माग
दृष्टिविहीन सगरमाथा अभियानमा